Muuri News Network » Faah Faahin Kulankii dhexmaray Al-Shabaab iyo Odayaashii uu dirsaday Cabdullaahi Waafoow.
Faah Faahin Kulankii dhexmaray Al-Shabaab iyo Odayaashii uu dirsaday Cabdullaahi Waafoow.
Sep 5, 2016 - Comments off
Goor ay Middi uus ku tagtay ayaa Cabdullaahi Waafow iyo Kooxdiisa abaabuleen qaar ka mid ah Odayaasha Biimaal ee ku dhaqan Gobolka Shabeelada hoose si ay ula kulmaan Al-shabaab oo maalmihii ugu dambeeyay ugaarsi ku haayay Ciidamada Deegaanka.
Kulanka ayaa waxaa u ka dhacay deegaanka Gendershe ee Waqooyiga Magaalada Marka, Odayaashii ka socday Beesha Biimaal ayaa waxey guda galeen in ay ka hadlaan Ugaarsiga Al-Shabaab ay ku heyso Ciidamada Deegaanka iyo waxa uu Salka uu ku haayo.
Al-Shabaab ayaa iyagana dhankooda ku jawaabay in uusan jirin Dagaal ka dhaxeeyo Beesha Biimala iyo AL-Shabaab, markii laga reebo Shaqsiyaad Xiriir la leh Dowlada Federaalka oo Gobolka Shabeelada hoose ka wado Arrimo ka dhan ah Ururka Al-shabaab.
Waxaa kaloo ay halkaasi ka Sheegeen in Al-Shabaab ay maamusho deegaano badan oo ay Beesha Biimaal degto, wax dhibaato ahna aysan ka jirin.
Ugu dambeyntii Odayaashii ka qeyb galay kulanka waxaa lagu amray in aan la maqli karin wax maamul sheeganaya oo aan ka aheyn Maamulka Al-Shabaab, waxaa kaloo ay sheegeen in ay la dagaalamayaan Cid kasta oo qori ku wadata deegaanadaas.
Soomaali waxey tiraahdaa ishiisa laga arkaa u shiisa lagu tumaa, Waqti waa jirtay Al-Shabaab aysan soo haweysan karin Ciidamada Deegaanka, Shaqisyaadkii Ciidamada Deegaanka sidaan u kala furfuray, ayaa hadana ugu dambeyntii la heshiiyay Saraakiisha Ciidamada Dowlada.
Talo xumada Waafoow iyo Kooxdiisa ayaa waxey mareysaa in maanta Ninka Biimaal loo dilo Dowladii Shalay gurigiisa gubeysay Darteed.
Mida ugu daran ayaa waxey tahay in Waafoow iyo Kooxdiisa habeenkii Xirada Amisom ku hoydaan, dhalinyaradii ay Baxarka geliyeena ay Banaanka ugu tagaan.
Shalay ayaa ugu dambeysay, oo Afar ka mid ah Ciidamada Deegaanka lagu qarxiyay Duleedka Degmada Muuri.
Danta guud iyo danta qaaska ah waa kala labo, Halganka Beesha Biimaal iyo Kooxda Waafoow waa kala Labo.
Waxgaradka Beesha Biimaal waa in ay u kacaan arintaan, waa in aysan dhayalsan wax Ciidan Dowladeed la yiraahdo ma jiraan waa kuwii shalay guryaheena gubayay oo maatideena leynayay, in maanta kuwaasi ay la heshiiyaan Waafoow iyo Kooxdiisa, sidaasna Dagaal Ujeedo la’aan ah lagu geliyo Ciidamada Beesha Biimaal, iyagoo weli dhulkooda ay heystaan kuwa Maanta dartooda loo dilayo.